My CookBook (Recipe Manager) APK သည် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » ဟင်းချက် Apps ကပ » အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ် (ကြော် Manager က)
အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ် (ကြော် Manager ကို) APK ကို
တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများသိုလှောင်သိမ်းဆည်း! အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်သွင်းကုန် features တွေပါတဲ့စာရွက်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ web ပေါ်မှာချက်ပြုတ်နည်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်သွင်းကုန် features တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာရွက်ဒေတာဘေ့စ Build ။
ဒါဟာသင်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် cookery ပါ!
သငျသညျသစ်တစ်ခုစာရွက်ရှာနေလဲ? web ပေါ်မှာသစ်တစ်ခုစာရွက်ရှာတွေ့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာဖွေအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဦးတည်းတွေ့ကြပြီဘယ်အချိန်မှာ, ငါ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ထဲသို့တင်သွင်း။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်သင့်တက်ဘလက်နေရာတိုင်းကကြည့်ရှုရန်နိုငျပါလိမျ့မညျ။ သင်, သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကို add ပါဝင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လမ်းညွန်ကိုပြောင်းလဲရန်, သို့မဟုတ်သင်မှတ်ချက်များကိုပိုင်ဆိုင် add နိုင်ပါတယ်
သငျသညျပြီးသားတစ်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ရှိသည်? ကိုယ်တိုင်အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ထဲသို့အသစ်တခုစာရွက် Add, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစားအစာမာစတာ (.mmf), MasterCook (.mxp), LivingCookBook (.fdx), ReKconv (.rk) များကဲ့သို့ကူညီပံ့ပိုးသည့်ဖိုင် Format ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်တင်သွင်းရန် ...
သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အချို့သောချက်ပြုတ်နည်းများမျှဝေဖို့လိုသလား? အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ် join ဖို့သင်၏မိတ်ဆွေများ Invite, သူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများဝေမျှနှင့်၎င်းတို့၏ချက်ပြုတ်နည်းများရှုမြင်ကြသည်။ သို့မဟုတ် Facebook ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်, SMS, နှင့်အခြားသူများအားဖြင့်သင့်ချက်ပြုတ်နည်းများမျှဝေပါ။ သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့သူတို့ app ကိုသို့ load နိုင်ပါလိမ့်မည်တဲ့ "ကျွန်မချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်" file ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်
• dropbox ကို အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသော Device များပေါ်တွင်သင်၏ချက်ပြုတ်နည်းများထပ်တူကျအောင်
•ချက်ပြုတ်နည်းများကိုဖတ်ရှုဖို့မိန့်ခွန်း feature ကိုသုံးပါ
•ထိုကဲ့သို့သောဆောင်ပုဒ်, စာလုံးအရွယ်အစား, အမျိုးအစားအဖြစ် app ကိုအမျိုးမျိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
•သင့် Android Wear လက်ပတ်နာရီပေါ်မှာပွင့်လင်းချက်ပြုတ်နည်းများ
အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ် Desktop ပေါ်မှာလည်းရရှိနိုင်ပါသည်: https://www.mycookbook-online.net
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဗားရှင်းအကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်အွန်လိုင်းပေါ်အခမဲ့အကောင့် Create နှငျ့သငျ (အပလီကေးရှင်းများနှင့် website ကိုအတွက်) ဤအပိုဆောင်း features တွေပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်:
•မိုဃ်းတိမ်၌ 105 ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့် 8 စျေးဝယ်စာရင်းအထိ Save
•အားလုံးသင့်ရဲ့ android application များနှင့်သင်၏အွန်လိုင်းအကောင့်များအကြား 105 ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့် 8 စျေးဝယ်စာရင်းမှတက်ထပ်တူကျအောင်
•မည်သည့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မည်သည့် device ကိုပေါ်ဤအကြောင်းချက်ပြုတ်နည်းများအားကြည့်ရှုစီမံ
•အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်အွန်လိုင်း join နှင့်၎င်းတို့၏ချက်ပြုတ်နည်းများကြည့်ရှုရန်သင်၏မိတ်ဆွေများ Invite
အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်အွန်လိုင်းပေါ်တစ်ဦးပရီမီယံအကောင့် ဖန်တီး. :
အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်အွန်လိုင်းပေါ်အကောင့်တစ်ခု၏ဖန်တီးမှုကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်နှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ၏နံပါတ်က Android application ကိုအတွက်ကန့်သတ်မထားပါ။
ကျနော်တို့ 200 ဝက်ဘ်ဆိုက်များထက်ပိုထောကျပံ့ပေး။ https://www.mycookbook-online.net/siterequests/: သင်၏အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမထောက်ပံ့လျှင်သင်ဒီမှာပြီးသားတင်သွင်းတောင်းဆိုမှုများအတှကျတောငျးဆိုခကျြသို့မဟုတ်မဲတင်ပြနိုင်ပါတယ်
အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်, သင်လိုသာချက်ပြုတ် app ကို!
အဆိုပါ app ထဲမှာကြော်ငြာတွေ add-on သို့မဟုတ်အကြှနျုပျ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်၏ paid version ကို install လုပ်နေဖြင့် In-app ကိုတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားစေခြင်းငှါ: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cookbookpro
Key ကိုစကားလုံးများကို: ထမင်းချက်, ချက်ပြုတ်, စာရွက်, စျေးဝယ်စာရင်းစာရွက်မန်နေဂျာ, စားသောက်စီမံ
- နယူးက်ဘ်ဆိုက်ထောက်ခံ: buonissimo.it (က)
- (က Android 4.4 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလိုအပ်သည်) တစ်စာရွက် Print
- နယူးက်ဘ်ဆိုက်ထောက်ခံ: sixx.at (de)
- က Settings: google ကနေထွက်ပြီး
- GDPR - ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသဘောတူညီချက်
- နယူးက်ဘ်ဆိုက်ထောက်ခံ: womensweeklyfood.com.au (en)
အနှေး Cooker ဗဟို (fr): - နယူးဝက်ဘ်ဆိုက်များထောက်ခံ
10.99 ကို MB